Dzidza Maitiro Ekutengesa mu2021 uye purofiti kubva kuDaily Yemahara Forex Signals 🥇
GADZIRA VIP FOREX SIGNALS
FX Nhau Kudya
EUR / USD Nhau
Yakabhadharwa Forex Maakaundi
Akanakisa Forex Mapuratifomu Ekutengesa
Akanakisa Forex Zviratidzo
Akanakisa Mahara Forex Signals Teregiramu Mapoka 2021
Forex Demo Akaundi
Mini & Micro Maakaundi
Inotarisirwa PAMM Akaundi
Forex Kutengesa PDF
Dzidza Maitiro Ekutengesa Crypto
Dzidza Kutengesa Bitcoin
Akanakisa Mahara eCrypto Signals Teregiramu Mapoka 2021
Iyo Yakanakisa Crypto Kutengesa Mapuratifomu
Tenga Bitcoin Nekadhi Rechikwereti
Tenga Bitcoin NeDebit Kadhi
Maitiro Ekutenga Ethereum
Yakanakisa Cryptocurrency Wallets
Dzidza Kutengesa Forex
Chii chiri Forex Market
Dzidza Kutengesa Masheya
Dzidza Kutengesa Kwezuva
Dzidza Mutengo Chiito Kutengesa
Chii chinonzi Forex Pips
Dzidza Kuwedzeredza Kutengesa
Mashandisiro Ekushandisa Revenue
Maitiro Ekugadzirisa Kwako Kupararira
Sei Kumusoro Kwekutengesa
Maitiro Ekushoma Masheya
Mashandisiro Ekushandisa Margin Pakutengesa
Akanakisa Ekutengesa Mapuratifomu
Akanakisa Masheya eStock
Teedzera otomatiki edu kuToro
Yakanakisa Forex Kutengesa Mapurogiramu
UK Kutengesa Maakaundi
Mutengo Chiito Kutengesa PDF
Penny Stock Kutengesa
Is Forex Kutengesa Halal
Islamic Maakaundi Ekutengesa
Vatengesi Vakanakisisa paToro
Islamic Islamic maBroker
Akanakisa ASIC Brokers
Akanakisa CFTC Brokers
Akanakisa eCSESEC Brokers
Akanakisa FCA Brokers
Akanakisa SEBI Brokers
Wenyika Maketeti Ongororo
Wepasirese Akanakisa Forex Signal Provider
Misika yepasirese pamagunwe ako
chero nguva, chero kupi
Joinha yedu Teregiramu ye Mahara Zviratidzo!
Vhiki nevhiki Crypto Roundup
75% emaakaundi eCFD anotengesa anorasikirwa nemari
78.77% emaakaundi eCFD anotengesa anorasikirwa nemari
Kutanga Kuwana MAHARA Zviratidzo izvozvi!
Kusvika ku10 Yakarurama, Inobatsira Zviratidzo Pazuva
Kuwana nyore kune Forex uye Crypto Zviratidzo
Yemazuva ese tekinoroji kuongorora uye zvekutengesa matipi
Nharaunda yevanopfuura 15,000 vatengesi vanoshingaira
Real-time yambiro, zvese kuburikidza neTeregiramu!
Joinha Teregiramu Boka
Pakarepo chenjedzo kune yako email
Pakati pe4-5 Yakarurama, Inobatsira Zviratidzo Pazuva!
Mazuva ese technical technical Kuongorora uye Kutengesa Matipi
Ndarama (XAUUSD) Mukuderera Pasi, Maface Kuramba paNhamba $ 1,760
NeChishanu, Gumiguru 1, 2021
Matanho Ekumisidzana Makiyi: $ 1,900, $ 1,950, $ 2000Makiyi Ekutsigira Nhanho: $ 1,750, $ 1, 700, $ 1,650 Goridhe (XAUUSD) Yenguva -Nguva Diki: RangingGold (XAUUSD) yanga iri munzira yekufamba ichidzika pazasi pekupikisa kwepamusoro pa $ 1,830. Kufamba kwedivi kwave kuenderera kubva muna Chikunguru. Musi waSeptember 2, vatengi vakadzorera kuramba kwepamusoro pamadhora 1,830 uye vakadzoserwa. Musika wave pa […]
Dhora rinosanganisa Zviwanikwa, Kuchenjerera Kuchinja kuEuro
China, Gunyana 30, 2021
Sezvo Dhora rinogaya kuwedzera kwesvondo-kutsigirwa kweichi chibereko, kutengesa kutarisisa kwachinjira kuEuro, kunyanya mumisika yemuchinjikwa. Zvichakadaro, kuwedzera kwenjodzi mafungiro kuri kubatsira mari yezvinhu uye Sterling, nedhora reAustralia riri kutungamira pakiti. Pamamiriro ekugadzikana panjodzi, iyo yen neSwitzerland franc dzinowanzove dzisina kusimba. Kushaikwa kwemabasa muEurozone […]
AUDUSD Inoenderera Mberi Kumuka Pakati Pesina Kunaka Musika Maonero
AUDUSD Mutengo Ongororo - Gunyana 30 Munguva yeAmerican musangano, iyo AUDUSD yakawana traction uye yakawedzera kusvika 0.7257, nyowani yezuva nezuva yepamusoro inotsigirwa neyakafara-yakavakirwa US dhora kuderera. Iyo DXY iri pasi 0.20 muzana, ichitaridza kekutanga nguva yadzikira zvichitevera mazuva mana ekuwana. Kunyangwe yakagadzikana US bond goho uye isina kuenzana US […]
Dogecoin (DOGE) Inochinja-chinja Pamusoro pe $ 0.20 Tsigiro, Kuderera kusvika ku $ 0.16 Zvichida
Nhanho dzeKuramba Dzakakosha: $ 0.45, $ 0.46, $ 0.47Makiyi Ekutsigira Nhanho: $ 0.25, $ 0.20, $ 0.15 DOGE / USD Yenguva refu Trendisheni: BearishDogecoin's (DOGE) mutengo wadonhera kumadhora 0.20 mushure mekutyora yapfuura yakaderera pa $ 0.21. Nhasi, crypto iri kuchinja pamusoro peiyo $ 0.20 rutsigiro. Mutengo uchangodonha usati wadonha, mutengo weDOGE wakatyora pazasi peiyo $ 0.21 rutsigiro, wakaridzorera usati watangazve pasi. Parizvino, iyo […]
Dhijitari Mari Inobatsira kune Yenyika Yese Economy: BIS Report
Chirevo chitsva chakaburitswa neBank of International Settlements (BIS) uye neboka remabhangi epakati vanosimbisa kuti mari yedhijitari inogona kusimudzira misha nekukurumidza uye kudhura kuchinjisa. Anenge masvondo maviri apfuura, mukuru weBank of International Settlements (BIS) Innovation Hub, Benoît Cœuré, akataura kuti mabhanga epakati anofanira kutora mvumo uye […]
Chart Yemazuva Ose
USDJPY Rally Inoenderera Mberi sezvo Iichiwana Zvakawanda Bullish Momentum
USDJPY Kuongorora - Mutengo Unoramba Uchienda Kukwiridzira kumusoro apo Momentum Inowedzera USDJPY rally ichienderera mberi nekukwira kwekuwedzera kuri kuwedzera. Vatengi vakawana chinzvimbo ichi mushure mekenduru inovhenekera kenduru padyo ne109.100 yakakosha kiyi nhanho. Mabhuru acho akabva awedzera kumanikidza, uye musika unoramba uchikwidza kumusoro. Mutengo, zvakadaro, wakagadzirirwa kusvika […]
Bitcoin Mining Indasitiri muUS Inogona Kubatsirwa kubva kuChino China Ban: Florida Meya
Meya weMiami, Florida - Francis Suarez - anotenda kuti kubiwa kweBitcoin (BTC) uye cryptocurrency nehurumende yeChinese mukana wakakosha kumusika weAmerica kushandisa. Meya, uyo parizvino anoshanda kuvaka guta rake kuita hubhu reBitcoin, akaudza Bloomberg kuti: "Nguva yekuchinja yave. Zvinogadzira zvisinganzwisisike […]
CYCE - Iyo Mutambo-Inoshandura Chiratidzo chinogonesa Global Impact
Kubata base neCYCE, chiratidzo chevhu che ERC-20 icho chinoshandura zvakanyanya nzira yatinofunga nezve cryptocurrency. Ndiro bhizinesi reTurkey Crypto Carbon Energy yekutanga blockchain chirongwa, asi zvasvika kune yakakwira noti. Nechinangwa chekurwisa Global Climate Change, CYCE inoda kugadzirisa shanduko yesimba rinowanikwazve kubva […]
Uniswap (UNIUSD) Mutengo: Bullish Movement Inokonzeresa pamadhora gumi nemanomwe, May Enderera kusvika $ 17
Uniswap Price Analysis - Gunyana 30 Mutengo wacho unogona kupinda mukati memwero wekudzivirira we $ 26 uye wedzera wakananga kumatenga ekupikisa e $ 30 ne $ 37. Kusakwanisa kupindirana nematanho ekudzivirira emadhora makumi maviri nematanhatu nemabhuru zvinogona kukonzeresa kumusika wakasiyana kana kusimuka kwekumusoro kuenda kumatanho ekutsigira pa $ 26, $ 21 uye $ 17. UNI / USD Musika […]
Yepamberi Cash Kadhi
Yepamberi Kadhi Kadhi Ongororo: Maitiro Ekutarisa kunze AdvCash Limit
Yepamberi Mari, yakapfupikiswa seAdvCash, isangano rakazara rekubhadhara rakatanga kuve muna 2014. Belize's International Financial Services Commission yakabvumidza chikuva chekutumira mari. Zvakare, ino sisitimu zvakare yakabatana neWave Crest Holdings Limited, inozivikanwa munharaunda yeBitcoin kadhi kadhi. Iyi chikuva inopa yakakosha sevhisi kumunhu wese ane hukama nechero […]
Tengesa misika ne
Tevedzera yedu yemahara Forex masheni pane cryptocurrencies, zvigadzirwa, uye indices
Kopa vatengesi vakanyanya
Bata misika mikana ne akanakisa Forex brokers
Dzidza Kutengesa Forex Strategies uye Nhau
Yekupedzisira Nongedzo kune Forex maBroker
Pasina mubvunzo, bhuroka anotamba chinzvimbo chakakosha mumusika we Forex. Asi sekutanga, iwe unonzwisisa here iro basa rinoitwa nevatengesi? Verenga yedu Forex brokers 'gwara pano kuziva ekutanga mabasa eiyo Forex broker.
Kutengesa kwakawanda kunofanirwa kuitwa se newbie mumusika we Forex, asizve (zvakare), iwe unoda yakanakisa forex yekutengesa chikuva kuti uite ako emaoko. Ndosaka peji redu pano rinotsanangura akanakisa epamberi ekutengesa mapuratifomu evatangi.
Chengeta Chinyorwa Chekutengesa
Rondedzero yekutengesa ingori danda rezviitiko zvako zvese zvekutengesa. Kazhinji, jenali rinopa chishandiso kune chero vatengesi vane hukasha vanoda kuzviongorora zvine mutsindo. Asi zvinokosha zvakadini kuchengeta bhuku rakaparadzana? Regai tikutaurirei zvese izvo zvamunoda kuziva pano.
Kuverenga iyo Mitero Yezvido
Chimbadzo chekuchinja chinokanganisa musika wepamberi zvakanyanya. Shanduko dzinogona kazhinji kuitwa neimwe yemabhangi epakati epasi rose. Shanduko dzinoita mhedzisiro kune vatengesi vemusika, uye nekudaro, kunzwisisa maitiro ekuita pamwe nekufungidzira mafambiro aya achave ari ekutanga nhanho dzekuita purofiti yepamusoro.
Pedzisa Kutenga Kwako
Kubudirira Kubva Zuva Rekutanga
Dzidza Kutengesa Kana iwe uchangotanga kunze munyika ye online trading, iwe wauya zvechokwadi kunzvimbo chaiyo. Yedu webhusaiti inokusimbisa nezvose zvishandiso zvinodiwa kuti utore basa rako rekutengesa kure kurudyi tsoka.
Isu tinopa magwara akazara pazvinhu zvese-zvekutengeserana - senge mashandiro ema multi-trillion pound forex indasitiri, chii maCFD uye nei achikosha kune ako erefu-nguva ekudyara zvinangwa, kuwedzera, kupararira, misika odha, uye chero chimwe chinhu icho isu tinofunga iwe unofanirwa kuziva usati watanga kuisa njodzi yako wega mari.
Nechisimba, pamunenge muchishandisa nguva inodikanwa kuongorora kuburikidza nematurusi edu mazhinji ekudzidzisa, iwe uchasiya chikuva chedu nehunyanzvi hunodiwa uye ruzivo kuti ubudirire pakutengesa kwako pamhepo.
Kutengesa kweVatangi: Kushambadzira Kwepamhepo Kunoshanda Sei?
Kana iwe usati wamboisa bhizimusi rimwe muhupenyu hwako, zvakakosha kuti iwe uzive zvauri kuita usati waparadzana nemari yako. Mushure mezvose, kutengesa kwepamhepo kunouya nenjodzi zhinji - dzakawanda dzadzo dzinogona kutadzisa kugona kwako kuita purofiti isingachinji. Saka nekudaro, ngatitangei nekuwana 360-degree kutarisisa maitiro ekupedzisira-kusvika-kumagumo maitiro ekutengesa.
Kusarudza Online Broker
Kuti utengese online, unofanirwa kushandisa broker. Yakaenda kare mazuva ayo iwe aunofanirwa kuisa tenga uye utengese maodha parunhare nefoni stockbroker.
Pane kupokana, zvese izvozvi zvaitwa online. Muchokwadi, kwete chete iwe unogona kutengesa kubva kunyaradzo yeimba yako wega, asi vazhinji vepamhepo vatengesi ikozvino vanopa zvizere-zvakazara zvekutengesa maapplication. Nekudaro, iwe unogona ikozvino kushambadzira uchinge uchifamba.
Nezvo izvo zvataurwa, kune chaiwo zviuru zvevatengesi vepamhepo vanoshandira vatengi vezuva nezuva vevatengesi. Kune rimwe divi, izvi zvinonyanya kubatsira kubva pakuona kwako sewe mutengesi, sekuzadza-kwakawanda kwemapuratifomu kunoreva kuti vatengesi vanofanirwa kukwidza ante kuti vadzivise makwikwi.
Izvi zvinogona kuuya nenzira yekudzikisira mari yekutengesa uye inopararira inopararira, kana zvinhu zvitsva senge 'Copy Trading'. Kune rimwe divi, izvi zvinoita kuti zviome zvakanyanya kuziva kuti ndeipi online yekutengesa chikuva kusaina nayo.
Iwe Unosarudza Sei Online Yekutengesa Platform?
Kuti ikubatsire munzira, isu takanyora zvimwe zvezvinhu zvakakosha zvaunofanira kufunga kana uchisarudza online broker.
Kuti ugone kupa masevhisi ekushambadzira epamhepo kune vatengi vekutengesa vanobva kuUK, vatengesi vanofanirwa kutongwa neFinancial Conduct Authority (FCA). Saka nekudaro, ichi chinhu chisingaitwe nhaurwa kana zvasvika pakusarudza chikuva chitsva.
Muzviitiko zvakawanda, wepamhepo broker anonyora yayo FCA kunyoresa nhamba, iyo iwe yaunogona kubva kuyambuka-mareferensi kuburikidza neyemutevedzeri webhusaiti Kana ikasaita, unogona kutsvaga zita remutengesi pamhepo kuburikidza nerejista yeCAFA. Pakupedzisira, kana bhuroka asina kuwana rezinesi reCAFA, unofanirwa kudzivirira chikuva chero zvodii.
Iwe zvakare unofanirwa kufunga kuti ndeipi nzira yekubhadhara yaunofarira kushandisa kana zvasvika pakuisa nekubvisa mari. Nzira iri nyore yekuita izvi ndeyekubhadhara kana kiredhiti kadhi, sezvo madipoziti anowanzoitika ipapo.
Uyezve, vamwe vatengesi vanobvumidza iwe kushandisa e-chikwama sePayPal kana Skrill, kunyangwe izvi zvisiri izvo nguva dzose. Pamusoro pezvo, vazhinji vevatengesi vanotsigira kuendesa kubhangi. Kunyangwe izvi zvinowanzo bvumidza yakakwira miganho, kuendeswa kwebhangi ndiyo inononoka kubhadhara sarudzo.
🥇 Mari uye Kupararira
Iwe unozofanirwa kubhadhara mubhadharo weimwe mhando kuti ushandise online yekutengesa chikuva, sevatengesi vari mubhizinesi rekuita mari. Ungangoda kubhadhara inoshanduka komisheni, inova muzana yemari yaunotengesa. Semuenzaniso, kana iwe ukaisa bhizimusi rinokosha £ 4,000, uye broker anobhadharisa 0.2% mukomisheni, ipapo unozopedzisira wabhadhara £ 8 mumari.
Pamusoro pekutumwa, iwe zvakare unofanirwa kufunga nezvekupararira. Uyu ndiwo mutsauko pakati pemutengo wekuti 'tenga' uye 'tengesa'. Kana iko kupararira kuri kukwirira zvakanyanya, saka zvinozove nekukanganisa kwakanangana nekugona kwako kuita mhindu isingachinji Semuenzaniso, kana iko kupararira kuchienzana neicho chaicho-chenyika chikamu che1%, iwe uchafanirwa kugadzira angangoita 1% kungopaza kunyange.
🥇 Zvekushandisa Zvemari
Iwe zvakare unofanirwa kuita kumwe kufunga maererano nenhamba, uye mhando ye, zvemari zviridzwa zvakachengetwa ne broker. Mune yakawanda kesi, epamhepo kutengesa mapuratifomu anofukidza forex neCFDs. Nezve zvekare, apa ndipo paunotenga nekutengesa mari, uine tarisiro yekuwana purofiti kubva pamitengo midiki yemitengo.
Panyaya yeCFDs (kondirakiti-yemisiyano), izvi zvinokutendera kuti ufungidzire nezve chero kirasi yeasset, pasina kuda kuve neyako midziyo yeaseti. Semuenzaniso, maCFD anotendera iwe kuti utengese chero chinhu kubva mumatanda nemasheya, goridhe, oiri, gasi rechisikigo, indekisi yemusika wemasheya, mitero yemitero, ramangwana, uye kunyangwe mari yemadhora.
Tools Zvishandiso Zvekutengesa
Iwe uri nani kushandisa broker iyo inoisa kukoshesa kwakasimba pazviratidzo zvehunyanzvi. Zvishandiso zvakadaro zvinokutendera kuti uongorore nhoroondo yemitengo maitiro mune yepamusoro nyaya. Mukuita kudaro, iwe unomira mukana wakanakisa wekutarisa kuti kupi ramangwana ratidziro yesaiti yako yakasarudzwa ichaenda.
Anonyatso kuzivikanwa matekinoroji masisitimu anosanganisira stochastic oscillators, inofamba mavhareji (MA), hama simba index (RSI), uye bollinger mabhendi. Pakupedzisira, iwe unofanirwa kusarudza epamhepo yekutengesa mapuratifomu ayo anopa akawanda ezviratidzo zvehunyanzvi.
Kuwanika kumaturusi ekutsvagisa zvakare chinhu chakakosha icho chaunoda kutarisa paunenge uchisarudza chikuva chitsva chekutengesa. Izvi zvinofanirwa kusanganisira chaiyo-nguva nhau dzenhau dzinogona kukanganisa imwe nhumbi kana indasitiri.
Zvakare, zvinobatsirawo kana vatengesi vaine yakatsaurwa chikamu chekuongorora. Apa ndipo apo vatengesi vane hunyanzvi vanoburitsa maonero avo pane imwe nhumbi inogona kufamba mumisika munguva pfupi.
Vhura Akaundi Ine Online Yekutengesa Platform
Paunenge iwe uchinge wasarudza online broker inosangana nezvako zvaunoda, iwe unozobva wafanirwa kuvhura account. Maitiro ekunyoresa kazhinji haatore anopfuura maminitsi mashanu kusvika gumi. Chaizvoizvo, broker inoda kuziva kuti iwe ndiwe ani, uye kana iwe kana kwete iwe uine ruzivo runodiwa rwekutengesa online. Izvi ndezvekuona kuti chikuva chinoramba chichienderana nemirau yakataurwa neCA.
Hezvino izvo ruzivo iwe rwauchazoda kuisa kana uchivhura account ine yekutengesa saiti.
Iwe unofanirwa kuisa ruzivo rwako rwega. Izvi zvinosanganisira zita rako rizere, kero yekumba, zuva rekuzvarwa, nhamba yeinishuwarenzi yenyika, uye ruzivo rwekuonana.
✔️ Ruzivo Rwebasa
Bhuroka achazoda kuziva chimiro chako chebasa uye mari yako yegore mushure memutero.
✔️ Kumira Kwemari
Iwe unozofanirwa kurega broker azive izvo zvaunofungidzirwa kuti mambure akakosha chii, uye kana iwe uri mutengesi kana wesisitimu mutengi.
✔️ Yapfuura Kutengesa Chiitiko
Iyo broker ichakubvunza iwe mibvunzo ine chekuita neyako yekutanga yekutengesa ruzivo. Izvi zvinosanganisira mhando yemidziyo yawakatengesa munguva yakapfuura, uye saizi yekutengesa saizi.
Kuti urambe uchiteerana nemitemo inorwisa kubiridzira mari, ese maCA anotonga mapuratifomu ekushambadzira anozofanirwa kuongorora chako. Maitiro acho akatwasanuka uye zvinongoda kuti iwe uise kopi yako ID yakapihwa nehurumende, pamwe neuchapupu hwekero.
Kunyangwe vamwe vatengesi vachikubvumidza kuisa mari nzira yekuongorora isati yapera, hauzokwanise kutora mari kudzamara magwaro ako asimbiswa. Saka nekudaro, zvakanak kuwana KYC (Ziva Wako Mutengi) maitiro kunze kwenzira iwe uchangovhura account.
Kuderedza uye Kubhadhara
Kana zvasvika pakubhadhara yako account yekweretesi, iwe unofanirwa kupihwa dzinoverengeka dzakasiyana nzira dzekubhadhara. Kunyangwe izvi zvichizosiyana kubva kune broker-kune-broker, isu takanyora yakajairika dhipoziti uye nzira dzekudzora pazasi.
🥇 Zvikwereti uye Kadhi Kadhi
Kuisa mari kuburikidza nedhibhiti / kiredhiti kadhi kazhinji kunoguma nemari yekuti chikwereti chiripo ipapo ipapo. Ramba uine ziso pamubhadharo - kunyanya kana uchishandisa kiredhiti kadhi. Nepo broker isingakwanise kukubhadharisa chero mari pa-taura, uyo anopa kiredhiti kiredhiti anogona kirasi dhipoziti semari inofambira mberi. Kana zvikadaro, izvi zvinogona kukwezva mubhadharo we3%, uye mubereko uchiiswa ipapo ipapo.
Iyo yakawanda kwazvo yepamhepo yekutengesa mapuratifomu ichagamuchira kuchinjiswa kwebhangi. Maitiro acho anononoka kupfuura kubhadhara kwemakadhi / kiredhiti kadhi, kunyange miganho inowanzo kuve yakakwira. Kana iyo dhipoziti ikaitwa kuburikidza neUK Kurumidza Kubhadhara, mari yacho inogona kupihwa mbiri pazuva rimwe chete.
Kunyangwe zvisinganyanyo kuzivikanwa pane dhititi / kiredhiti kadhi kana kuendesa kubhangi, vanoverengeka veatsva-zera vatengesi vava kugamuchira e-wallets. Izvi zvinosanganisira zvinoda zvePayPal, Skrill, uye Neteller. E-Wallet madipoziti haasi emahara chete, asi kazhinji, anotendera iwe kuti utore mari yako munguva inokurumidza.
Kana iwe uchifarira kuita purofiti kubva kumamirioni-tiririyoni paundi nzvimbo yepasirese, ipapo unenge uchitenga nekutengesa mari. Pfungwa yepamusoro ndeyekuita purofiti uye uye kana mari yemari inofamba.
Nekudaro, iwe unenge uchitengesa forex 'vaviri', ayo ane maviri akasiyana mari. Semuenzaniso, kana iwe waida kuchinjisa paundi sterling uchipesana neiyo euro, saka iwe ungazofanira kutengesa GBP / EUR.
Nezvo zvataurwa, vamwe ma broker vanozonyora anopfuura zana akasiyana emari mairi. Aya mareti emari akapatsanurwa kuita zvikamu zvikuru zvitatu - vakuru, vadiki, uye exotics.
Seizvo zita rinoratidzira, makuru mairi ane maviri 'makuru' mari. Izvi zvinosanganisira mari kubva kune hupfumi hwakakura kwazvo pasirese, senge dhora reUS, pondo yeBritish, euro, yen yeJapan, neSwitzerland franc.
Kana iwe uchingotanga kunze munyika yekutengeserana kwepamberi, zvingave zvinokurudzirwa kunamatira nemaviri makuru. Izvi zvinodaro nekuti iwo makuru anosangana neakaderera volatility mazinga, akasimba anopararira, uye mirwi yemvura.
Zvidiki zvidiki zvichave nemari imwechete hombe uye imwe shoma yemari. AUD / USD muenzaniso wakanaka wevadiki vaviri. Dhora rekuAmerica rinomiririra mari hombe yevaviri, nepo dhora reAustralia iri mari isinganyanyodiwa.
Kunyangwe vadiki vachiri kubatsirwa kubva kuakakura huwandu hwemari, kupararira kunowanzo kuve kwakapamhamha kupfuura iwo makuru. Izvi zvinoreva kuti kutengesa vana vadiki kunodhura mukufamba kwenguva. Nezvo zvataurwa, kusagadzikana kwakati kwirei mumapara madiki, saka kune mikana yakawanda yekuita zvihombe zvihombe.
Exotic mari mapara ichave ine iri kubuda mari uye hombe mari. Izvi zvinogona kusanganisira dhora reUS neVietnamese dong, kana pondo sterling kurwisa iyo Turkish lira.
Chero nzira, mapara ekunze anogona kuve anonyanya kushanduka, uye anopararira kazhinji akafara kwazvo. Ichi ndicho chikonzero iwe uri nani kuregedza izvo exotic kusvikira iwe uchidzidza kutengesa forex padanho repamberi.
Forex Trade Inoshanda Sei?
Paunenge uchinge wasarudza mari yemaviri inotora zvaunofarira, iwe unozofanirwa kuona kuti nzira ipi iyo musika ichaenda. Tisati tanyatsoongorora kune zvakakosha, zvakakosha kujekesa musiyano uripo pakati peiyo 'tenga' odha uye 'tengesa' odha mumamiriro ekutengeserana kwepamberi.
🥇 Kana iwe uchidavira kuti mari yakamiswa pane iyo kuruboshwe yevaviri ava ichaenda wedzera Mukukosha, saka unofanirwa kuisa tenga odha.
🥇 Kana iwe uchidavira kuti mari yakamiswa pane iyo kurudyi-ruoko yevaviri ava ichaenda wedzera Mukukosha, saka unofanirwa kuisa kutengesa hurongwa.
Semuenzaniso, ngatitii uri kutengesa GBP / USD. Kana iwe ukafunga kuti GBP yaigona kuwedzera muukoshi kurwisa iyo USD, saka isu taizoisa yekutenga odha. Saizvozvo, kana iwe ukafunga kuti iyo USD ichawedzera kurwisa GBP, iwe waizoisa yekutengesa odha.
Muenzaniso weiyo 'Tenga' Order mune Forex Trading
Kunamatira neiyo GBP / USD theme, rega 'titi iwe wakaisa £ 500' tenga 'odha. Izvi zvinoreva kuti iwe unotenda kuti GBP ichawedzera mumutengo uchipesana neUSD.
Mutengo we GBP / USD pari zvino 1.32
Iwe wakaisa £ 500 kutenga odha
GBP / USD inowedzera kusvika pa1.34, zvichireva kuti GBP iri kusimba kurwisa iyo USD
Izvi zvinomiririra kuwedzera kwe1.51%
Yako purofiti yaizosvika pa £ 7.55 (£ 500 x 1.51%)
Muenzaniso we 'Tengesa' Order mune Forex Trading
Mumuenzaniso uyu, isu tiri kuenda kunonamira ne GBP / USD. Inguva ino chete, tiri kuenda kunoisa 'kutengesa' odha. Izvi zvinoreva kuti iwe unotenda kuti USD ichakunda GBP.
Iwe wakaisa £ 1,500 kutengesa odha
GBP / USD inoderera kusvika ku1.29, zvichireva kuti iyo USD iri kusimba kurwisa GBP
Izvi zvinomiririra kuderera kwe2.27%
Yako purofiti yaizosvika pa £ 34.05 (£ 1,500 x 2.27%)
Dzidza Kutengesa CFDs
Chikamu chechipiri chikuru cheiyo yekutengesa nzvimbo yepamhepo ndeye eCFDs. Sezvo isu takambotaura muchidimbu pakutanga, maCFD anotendera iwe kuti utenge nekutengesa zvinokwanisika zvese zveasset kirasi zvingafungidzirwe. Izvi zvinodaro nekuti hausungirwe kuve neyako kana kuchengetera iyo yepasi nhumbi yekudyara mairi.
Panzvimbo iyoyo, maCFD anongoteedzera iwo chaiwo-epasi mutengo wefa iri iri mubvunzo. Saka nekudaro, maCFD anonyanya kukoshesa kuwana misika iyo zvimwe zvingave zvakaoma kusvika.
Pazasi isu takanyora makuru easset makirasi ayo CFDs anovhara.
Masheya uye Masheya
✔️ Mitero Yezvibereko
✔️ Zvakaoma Simbi
CFD Inoshanda Sei?
Panyaya yekuti bhizinesi reCFD rinoshanda sei, izvi zvakafanana nekutenga nekutengesa mapaundi epamberi. Musiyano wakakosha waunoda kuti uzive padanho iri mazwi. Tichiri mune forex isu tinowanzo sarudza kutengeserana sekutenga kana kutengesa odha, munzvimbo yeCFD tinoshandisa mazwi ekuti 'refu' uye 'mapfupi'.
Zvakare, maCFD haauye ari maviri maviri senge forex. Panzvimbo iyoyo, iwe urikutengesa zvinhu uchipesana neicho chaicho-chenyika kukosha kwemari inotonga, iyo inowanzo kuve dhora reUS. Semuenzaniso, kunyangwe iwe uri kutengesa CFDs muchimiro chemasheya, oiri, gasi rechisikigo, kana goridhe - midziyo inowanzo kuve mutengo pamusoro peUSD.
🥇 Kana iwe uchidavira kuti pfuma iri kuenda wedzera Mukukosha, saka unofanirwa kuisa refu urongwa.
🥇 Kana iwe uchidavira kuti pfuma iri kuenda kuderera Mukukosha, saka unofanirwa kuisa pfupi urongwa.
Ichi ndicho chimwe chezvinhu zvinokwezva zvekutengesa CFDs, sezvo iwe uchagara uine sarudzo yekutengesa pfupi. Apa ndipo pauri kufungidzira pane iyo asset kurasikirwa kukosha. Ichi chinhu chingadai chakanetsa kudzokorora mune yechinyakare inzvimbo yekudyara sevatengesi vatengi.
Kana iwe uri kutsvaga kuchinjisa masheya kwenguva yakareba, ipapo uchave uri nani pakutenga ako akasarudzwa equities kubva kune akajairwa stockbroker. Izvi zvinodaro nekuti iwe uchave wega masheya chaipo, zvichireva kuti iwe uchajairira kune huwandu hwevachengeti vemari.
Nechisimba, izvi zvinosanganisira kodzero yepamutemo kune chero chikamu chemubhadharo unogoverwa nekambani iri kutaurwa - yakaenzana nenhamba yezvikamu zvauri kubata.
Nekudaro, kana iwe uchida kudzidza kutengeserana masheya kwenguva pfupi, iwe unozofanirwa kushandisa chikuva cheCFD. Izvi zvinodaro nekuti mari inobhadharwa nekutenga nekutengesa masheya mune yechinyakare pfungwa yakakwira zvakanyanya kupfuura maCFD. Zvakare - semutengesi mutengi unenge uine shoma, kana iripo, mukana wekukwanisa kupfupisa-kutengesa yako yakasarudzwa equity. Zvekare zvakare, ichi chinhu chinopihwa neanenge ese mapuratifomu eCFD.
Zvakangodaro, kana iwe uchida kuwana iyo yepasi rose misika yemari pamhepo, iwe uchave nesarudzo mbiri - kutenga nekutengesa zvikamu zvemunhu, kana kuisa mari muindekisi.
Kutengesa Kwega Kwega Kugovana
Kana iwe uine hunyanzvi hunodiwa hwekudyara mumakambani ega, iwe unowana mukana kuzviuru zvemari dzeCFD. Izvi zvinosanganisira makambani ebhuruu-chip akanyorwa pamisika dzinozivikanwa seNASDAQ neLondon Stock Exchange, pamwe nemakambani madiki-kusvika-epakati.
Kana uchisarudzira nzira yeCFD, kukosha kwezvikamu zvako zvauchasarudzira zvinoenderana nemutengo wepasi rose. Semuenzaniso, kana mutengo wezvikamu zveBritish American Fodya ukakwira ne2.3% munguva ye24, iyo CFD yayo ichawedzerawo ne2.3%.
Kutengesa kweStock Market Index
Kana iwe uchishuva kutengesa masheya uye masheya, asi iwe usina ruzivo runodikanwa kusarudza makambani ega ega, zvingave zvakakodzera kufunga nezve stock stock index.
Zvakare zvinonzi 'indices', misika yemasheya indekisi inokutendera iwe kufungidzira pamazana emakambani mune rimwe bhizimusi - zvichizopatsanura chinzvimbo chako kumakambani mazhinji.
Semuenzaniso, nekudyara muS & P 500, unogona kutenga zvikamu kubva kumazana mashanu emakambani makuru akanyorwa kuUS. Saizvozvo, iyo FTSE 500 indekisi inokutendera iwe kuti uise mari mumakambani zana makuru akanyorwa paLondon Stock Exchange.
Kamwe zvakare, kana ukasarudza sosi yemusika wemari muchimiro cheCFD, uchave nesarudzo yekufamba kwenguva refu kana ipfupi. Saka nekudaro, iwe unenge uchiri nemukana wekuita purofiti kunyangwe iyo yakafara misika yemasheya iri pasi.
Chii chinonzi Kupararira?
Zvisinei nekuti uri kutengesa forex kana maCFD - iwe unofanirwa kuve nekunzwisisa kwakasimba kwekupararira. Mune fomu yayo yakakosha, uyu ndiwo mutsauko pakati pemutengo we'kutenga 'uye mutengo' wekutengesa '. Pamusoro pemakomisheni ekutengesa, iko kupararira kunovimbisa kuti online vatengesi vanoita mari.
Hukuru hwekupararira hwakakosha kwauri semushambadziri, sezvo zvichiratidza kuti ndeyipi mari yauri kubhadhara zvisina kunangana. Semuenzaniso, kana paine 0.5% gap mukupararira pakutengesa masheya, izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa kugadzira kanokwana 0.5% mukuwana kungopaza kunyange.
Muenzaniso weKupararira muCFDs
Nzira iri nyore kwazvo yekuverenga kupararira pakutengesa maCFD ndeye kungoita mutsauko wepesenti pakati pemutengo wekutengesa nekutengesa.
Iwe uri kutsvaga kuenda 'kureba' pamafuta
Wako broker anopa iyo 'tenga' mutengo we $ 71
Iyo 'kutengesa' mutengo i $ 69
Izvi zvinoreva kuti kupararira ndiwo musiyano uripo pakati pe $ 69 ne $ 71
Mune zvikamu zvemazana, uku ndiko kupararira kwe2.89%
Kunyangwe iwe ukafunga kuenda kwenguva refu kana ipfupi pamafuta, iwe unobhadhara kupararira kwe2.89%. Izvi zvinoreva kuti iwe unozofanirwa kugadzira kanokwana 2.89% mune zviwanikwa kuti utyore kunyange.
🥇 Ukaenda refu pamafuta, uchafanira kubhadhara $71. Kana iwe ukakurumidza kubuda panzvimbo yako, iwe waizozviita pamutengo wekutengesa we $69. Saka nekudaro, iwe unoda mutengo wemafuta ku wedzera by 2.89% kungopaza kunyange.
🥇 Ukaenda pfupi pamafuta, uchafanira kubhadhara $69. Kana iwe ukakurumidza kubuda panzvimbo yako, iwe waizozviita pamutengo wekutenga $71. Saka nekudaro, iwe unoda mutengo wemafuta ku kuderera by 2.89% kungopaza kunyange.
Chii chinonzi Leverage?
Kuwedzeredza chishandiso chinonakidza uye chine njodzi zvakanyanya icho iwe chaunowana pane mazhinji epamhepo masaiti ekutengesa. Muchidimbu, zviyero zvinokutendera kuti utengese pamatanho epamusoro pane izvo zvaunazvo muakaundi yako yekweretesi. Huwandu chaihwo hunosarudzwa nechinhu, senge 2: 1, 5: 1, kana 30: 1. Iyo yakakwira iyo chinhu, iwe uchiwedzera kutengesa iwe uye nekudaro - iyo yakanyanya yako purofiti kana kurasikirwa kuchave.
Semuenzaniso, ngatiti iwe unongova ne £ 300 muaccount yako chete. Iwe unoda kuenda kwenguva yakareba pane gasi rechisikigo, sezvo iwe uchinzwa kuti iyo aseti yakanyanya kushomeka. Saka nekudaro, iwe unoshandisa chiyero chegumi: 10, zvichireva kuti iwe uri kunyatso kutengesa ne £ 1.
Mumuenzaniso uyu, yako £ 300 ikozvino ndiyo marginal. Kana kukosha kwekutengeserana kwako kukadzika nechinhu chegumi: 10 (1/100 = 10%), iwe waizorasikirwa neyako margin. Izvi zvinozivikanwa sekuve 'kubviswa'. Saizvozvo, kana margin yako yaive £ 10 uye iwe waive uchitengesa ku300: 25, iwe waizobviswa kana iyo pfuma ikadzika nechinhu che1: 25 (1/100 = 25%).
Kana iwe uri mutengesi wekutengesa anogara muUK (kana chero nhengo yeEuropean nhengo yenyaya iyoyo), unozotorwa nemipimo yekuisa yakaiswa neEuropean Securities and Markets Authority (ESMA).
ESMA Kuwedzeredza Miganhu
🥇 30: 1 yemakuru makuru e forex
🥇 20: 1 yezvisiri-zvakakura zve forex mapara, goridhe, uye makuru maindekisi
🥇 10: 1 kune zvimwe zvinhu kunze kwegoridhe uye zvisina-hukuru indices
🥇 5: 1 kune mumwe munhu masheya
🥇 2: 1 yemari yemadhora
Mitemo yeMisika: Ndezvipi Izvo uye Zvinoshanda Sei?
Kana iwe uchida kudzidza kutengesa online, zvakanyanyisa kukosha kuti iwe uzive mashandiro emusika mashandiro. Chaizvoizvo, izvi zvinokutendera iwe kuvhara otomatiki kana mamwe maapoindi emitengo arohwa.
Semuenzaniso, kana bhizinesi richienda mukuda kwako, unogona kuvimbisa purofiti nekuvhara bhizimusi otomatiki. Simiaillly, kana kutengeserana kukapesana newe, mutengo wemusika unogona kubuda mukutengesa uye nekudaro - kudzikisa kurasikirwa kwako.
Pazasi isu takanyora mamwe emakosheni akakosha emamaki aunoda kuti uzive nezvazvo.
Sezvinoratidzwa nezita iri, odha yekumira-yekurasikirwa inoderedza kutaridzika kwako kwese kutengeserana kuri kurasikirwa. Semuenzaniso, ngatiti iwe urikufungidzira paBitcoin, uye iwe unovhura bhizimusi rinokosha £ 2,000 pamutengo wekutenga we $ 9,500.
Saka nekudaro, iwe unotarisira kuti mutengo weBitcoin unowedzera. Nekudaro, iwe zvakare unoisa yekumira-kurasikirwa odha kuitira kana zvinhu zvikapesana newe. Sezvo iwe usiri kuda kurasikirwa inopfuura 5% yeako kukosha kwekutengeserana, iwe unoisa yekumira-kurasikirwa odha ku $ 9,025.
Mazuva mashoma gare gare, Bitcoin iri tanking uye inorasikirwa ne20% mukukosha. Pakutanga, iwe ungadai wakarasikirwa ne £ 400 (20% yako £ 2,000 yekutengesa). Nekudaro, sezvo iwe pawakaisa zvine musoro kumira-kurasikirwa pa $ 9,025, iwe wakaderedza kurasikirwa kwako kusvika kungori £ 100 (5% ye £ 2,000).
✔️ Yakavimbiswa Stop-Loss Order
Sezvo ichinyatsoita sekumira-kurasikirwa odha inogona kuve, hapana kana imwe vimbiso yekuti odha yako ichazadzwa. Semuenzaniso, kana iwe ukaisa yekumira-kurasikirwa odha pane GBP / USD panguva yeBrexit referendamu mhedzisiro, hazvigoneke kuti iyo odhiyo ingadai yawana mutengi. Izvi zvinodaro nekuti GBP / USD yakapfuura nenguva yekusagadzikana kwakanyanya.
Pane zvinopesana, 'yakavimbiswa' yekumira-kurasikirwa odhiyo ichagara ichifananidzwa, sezvo iri chibvumirano pakati pako newe broker. Cherekedza, iwe uchafanirwa kubhadhara yakakwira fizi kuti uite yakasimbiswa yekumira-kurasikirwa odha, kunyangwe, zvingangodaro zvakakodzera kubhadhara.
Tora -Profit Order
Kunyange zvichikosha kuchengetedza bhizimusi rako kubva pakuratidzirwa zvakanyanya kune kurasikirwa kukuru, iwe zvakare unofanirwa kumisikidza odhiyo yekuvhara otomatiki bhizinesi kana iwe waita purofiti. Zvikasadaro, iwe ungarasikirwa nemukana wekukiya-mukati zviwanikwa kana usiri pane yako desktop desktop. Nekudaro, kutora-purofiti maodha anovhara kutengeserana pamutengo wakatsanangurwa.
Semuenzaniso, kana iwe uri kutengesa sirivheri pa $ 18.24, uye iwe unoshuvira kukiya-mune purofiti kana iyo pfuma ichiwedzera ne10%, iwe unogona kuisa yekutora-purofiti ku $ 20.06. Kana mutengo wacho ukarova $ 20.06, iro bhizimusi rinozovhara otomatiki pamwe nemari ye10%.
Usambofa Wakarasikirwa neKutengeserana Zvakare
Real-nguva chiratidzo chiziviso pese panovhurwa chiratidzo, ichivhara kana Kuvandudzwa
Pakarepo chenjedzo kune yako email uye nhare mbozha.
Yekupinda mwero wemitengo yechiratidzo chese Ingo sarudza mumwe wedu weTop Brokers mune irwo runyorwa pamusoro kuti uwane zvese izvi mahara.
GBP / USB tenga
Ndinoda kugamuchira mishumo yemusika, kukwidziridzwa kwakakosha uye tsamba dzetsamba. Ndakaverenga, ndakanzwisisa uye ndakagamuchira iyo Mitemo & Maitiro uye Yakavanzika Policy.
Akanakisa Forex Signals 2021
Mashandisiro ekushandisa Forex Signals
Forex Kutengesa Kosi
Rarama Forex Rates & Chati
Forex Signals Teregiramu
Forex Brokers Gwara
Ungasarudza sei Broker
Crypto Signals Teregiramu
Dzidza 2 Kutengesa izita rekutengesa reGadget Geek Online Ltd
Hofisi 1/2373, Chikamu G, Quantum Imba, 75 Abate Rigord Street, Ta 'Xbiex, XBX 1120, Malta
Kunyoreswa Kambani Nhamba: 11746374
Ruzivo rwewebsite yeLearn2.trade uye mukati medu Teregiramu Boka inoitirwa zvinangwa zvekudzidzisa uye haifanire kutorwa sezano rekudyara. Kutengesa misika yezvemari inotakura nhanho yepamusoro uye inogona kunge isingaite kune vese vanoita mari. Usati watengesa, iwe unofanirwa kunyatso kufunga nezve ako ekudyara zvinangwa, ruzivo, uye njodzi njodzi. Chete kutengeserana nemari iwe yawakagadzirira kurasikirwa nayo. Kufanana nechero kudyara, pane mukana wekuti iwe unogona kutsigira kurasikirwa kweimwe kana yako yese yako yekudyara iwe uchitengesa. Iwe unofanirwa kutsvaga yakazvimirira kuraira usati watengesa kana iwe uine kusahadzika. Kuita kwakapfuura mumisika haisi chiratidzo chechokwadi chekuita mune ramangwana.
Learn2.trade haitore mutoro wekurasikirwa kwakaitika nekuda kwechinyorwa chakapihwa mukati medu maTeregiramu Mapoka. Nekusaina senhengo unobvuma kuti isu hatisi kupa mazano ezvemari uye kuti urikuita sarudzo pamabasa aunoisa mumisika. Hatina ruzivo rwehuwandu hwemari yauri kutengesa nayo kana iyo nhanho yenjodzi yauri kutora nekutengesa kwega kwega.
Copyright © 2021 Dzidza 2 Kutengesa
Dhipatimendi $ 250 Kuti Utore Mahara VIP Forex Zviratidzo zvegore rimwe!
Tora Zviratidzo zveVIPDhipatimendi $ 50 Kuti Utore Mahara VIP Forex Zviratidzo zvegore rimwe! Trade pamusoro MT4 pamwe Leverage kusvika 1 500!